Jaalalli aangoo gaggeesitoota Afrikaa hanga heera jijjiiruutti - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti filannoon gaggeeffamee taayitaa karaa nagaa taheen dabarsuun ammayyuu waan amaleeffatame hin fakkaatu.
Biyyoota tokko tokko keessatti gama tokkoon gaaffii dimokiraasii uummatni kaasu, gama kaaniin ammo aangoo irra turuuf jecha murtoo gaggeessitootni fudhatan akka wal dhabdeen hammaatu taasisaa jira.
Torban darbe keessa Ijipti yeroo turtii pirezidaantii gara waggaa jahaatti guddisuun Alsiisiin hanga bara 2030tti akka taayitaa irra turuuf carraa kan kennuuf heerri biyyittii bahe ragga'eera.
Kan ragga'u taanaan Alsiisin waggoota itti aananiif aangoo irra turuu isaati. Bulchinsa waggaa dheeraa Hosni Mubarek booda Mursiin gara taayitaatti dhufu fincila yeroo sana tureen ajaajaa waraanaa kan ture Alsiisiin taayitaa qabate.
Bara darbe Filannoo gaggeeffameen sagalee 97% ol argachuun aangoo harka keessa galfate. Yeroo sana morkattotni isaa hedduun mana hidhaa galaniiru jedhama.
Pirezidaantiin Igipti kun dura taa'aa Gamtaa Afrikaa tahuun kan hojjechaa jiran yoo tahu fonqolcha mootummaan gara aangootti dhufan kan jedhuufi sarbama mirga namoomaan ni qeeqamu.
Biyyi biraan pirezidaantiinshee akka taayitaa irra turuuf hojjechaa jirtu Yugaandaadha. Manguddoon ganna 75 Yoweri Museveniin bara 2021tti ammas irra deebiin filamuu barbaadu.
Pirezidaantiin Aljeeriyaa Buuteflikaan aangoo gadhiisan
Pireezidaantii Yugaandaa: Maaliif akkan Tiraampiin jaaladhu
Heerri mootummaa biyyittii namni umuriin isaa waggaa 75 ol tahe pirezidaantummaaf akka hin dorgomne dhorka ture.
Haa tahu malee dhorkinsa kana kaasuun yeroon aangoo irra turuu gara biraan pirezidaantichaaf akka mijatu taheera.
Manni murtii olaanaan Yugaandaa fooyya'insicha deeggareera.
Abbootiin seeraa afur fooyya'insicha yommuu deeggaran sadii ammo turuu qaba jechuun mormanii ture.
Qeeqxotni siyaasaa ammoo fooyya'insichi pirezidaantichi umurii guutuu taayitaa irra akka turuuf carraa banaaf jedhu.
Pirezidaantiin Sudaan Omar Al Bashiris akkasuma waggoota 30'f taayitaa irra turanis yeroo uummatni jijjirama barbaadee taayitaa akka gadhiisaniif gaafataa turetti diduun xumurri isaanii mana hidhaa taheera.
Humni waraanaa Sudaan karaa mana maree humna waraanaa taayitaa qabattus uumatni mormii hin dhaabne.Aangoon harka uummataatti deebi'uun buluu qabna gaaffii jedhutu itti fufe.
Obbolaa Omar AL Bashir dabalatee humnootni nageenyaa isaaf amanamoo tahanii fi qondaaltotni olaanoon tokko tokkos to'annoo jala oolaa jiru.
Gamtaan Afrikaa dhimmi kun guyyoota 15 keessatti furamuu akka qabu akeekkachiisee ture.
Haa tahu malee namootni pirezidaantii Ijipti Alsiisii ofii iyyuu aangoo humnaan qabate jechuun qeeqan akkamitti akeekkachiisuu danda'a jedhuuni.
Pirezidaantiin Aljeeriyaa hanga rakkoo fayyaaf saaxilamnii deemuu fi dubbachuu dadhabanitti taayitaa irra turuuf itti cichanii mormii uummataa dura dhaabbatan.
Gaaffiin lammiilee Aljeeriyaa waan cimeef akka filannoo biyyattii dhufu irratti hin dorgomne ibsan. Haa tahu malee booda karaa ajajaa humna waraanaa biyyattii akka aangoo irraa bu'an taasifamuun taayitaa gadhiisuu isaanii beeksisan.
Manguddoon waggaa 82 waggoota 20'f biyyattii bulchan marsaa itti aanu irrattis filannoo irratti hirmaachuuf turan.
Pirezdaantiin Aljeeriyaa filannoo marsaa 5ffaa keessaa ba'an
Biyyootni akka Burundii fi Koongoos haala wal fakkaataa keessa turan. Gaggeessitootni Afrikaa yeroo hedduu bu'aa sagalee filannoo irratti yeroo wal himatanii fi aangoo irra turuuf labsiifi heera jijjiran haala Kanaan mul'ataa tureera.
Har'as pirezidaantii Maalii dabalatee kaabinootni biyyittii haala nageenyaa biyyichaa to'achuu dadhabn jechuun mormiin waan itti hammaateef taayitaa gadhiisuu isaanii beeksisan.
Waraanni walii waliinii fi ajjeechaan saba Fuulaanii irratti dhiyeenya raawwate sababa guddaadha jedhama. Pirezidaantii Zimbaabuwee duraanii Rooberti Mugaabeenis akkasuma deeggarsa humna waraanaa biyyittiin ture kan aangoo gad lakkisan.
Ripablika Jiddu-gala Afriikaa
Abdelaaziz Buuteflikaa: Pirezidaantiin Aljeeriyaa dhiibbaa mormiitiin aangoo gadhiisan
Museeveenii Yugaandaa : Afriikaanotatti waan sirri waan himeefan Tiraampiin jaaladha
Pirezdaantiin Aljeeriyaa Abdellaaziiz Botiflikaa filannoo marsaa 5ffaa keessaa ba'an
12 Bitooteessa 2019
Pirezidaantiin Aljeeriyaa marsaa xumuraaf dorgomuuf murteessanis mormii cimaan isaan mudateera
4 Bitooteessa 2019
KALLATTIIN Omaar al-Bashir ganna 30'n booda aangoorraa bu'anii waraanni aangoo qabateera
MM Abiy gara adda waraanaa duuluun 'dogoggoraan hubatame'
30 Sadaasa 2021
Waa'ee Finfinnee wanta dubbatamuufi waan lafa jiru
Ragaan miliqee bahe aangawooti olaanoo Chaayinaa hacuuccaa Muslimoota Uyigooriin hidhata qabu jedhe
27 Sadaasa 2021
Adunyaan gosa koroonaavaayirasii haaraa 'Omicron' to'achuuf muddamatti jirti
Leenjisaan yeroo Maanchistar Yunaayitid qacaruuf jiru eenyu?, maal jijjiiruu danda'a?
26 Sadaasa 2021
Nageenyi namoota siyaasaa mana hidhaa jiranii 'yaaddoo jabaa' nutti uume - Maatii fi Abukaatota
25 Sadaasa 2021
Shawaa Lixaatti qondaalotni mootummaa sadii 'hidhattootaan' ajjeefaman
23 Sadaasa 2021
Pirezidantiin Itoophiyaa gabaasa MM Abiy waliin waldhabdee qabu jedhu balaaleeffatan
24 Sadaasa 2021
Kongirasiin Oromoo Idil-addunyaa dhiheenya hundaa'e maal hojjeta?
22 Sadaasa 2021
MM Abiy hidhattoonni TPLF waliin hiriiran hundi harka akka kennataniif waamicha dhiyeessan
Wal-shakkii waraanni Kaaba Itoophiyaa uumee fi aarsaa kaffalame
Daldalaan haadha warraasaa waggoota 27f waliin jiraateef mana ajaa’ibaa ijaare
MM dubartii jalqabaa Siwiidiin aangoo qabattee sa'aatii muraasa keessatti gadhiiftetti deebiite
Barsiisaan Booranarraa waa'ee nagaa walaloo barreesseef badhaafame maal hima?
Chaayinaan lammii Kooriyaa Kaabaa mana hidhaatii miliqee ture deebiifte to'atte